Flent: yakakwana test kit yekuyedza network kubatana | Linux Vakapindwa muropa
ari network dzave kukosha kubatanidza kumakomputa ese epasi uye kubvumidza kuwana nekukurumidza kune ruzivo. Nekudaro, kana kubatana kukakundikana, ivo vanowanzo shungurudza vashandisi uye dzimwe nguva kunonetsa kuongorora. Kuti ikubatsire neizvi, kana kuita mabhenji, unogona kuchengeta iyo Flent app iripedyo.
Icho chemahara uye chakavhurika sosi chishandiso icho chinowanikwa kuLinux (zvakare ye macOS uye FreeBSD), zvese zviri mumatura uye mune zvimwe zvitoro zveapp, senge Ubuntu Software Center. Zita rayo rinobva FExible Network Tester, uye yakanyorwa muPython, ine mafoni akawanda kune akasiyana network maturusi ayo anozoitwa otomatiki kuvhura mhedzisiro yeiyo mamiriro enetiweki yako uye kuratidza graphical ruzivo.
Naizvozvo, Flent ndeye nzwisisika yekuongorora chishandiso network kuenzanisa iyo inokutendera iwe ku:
Ita network miedzo uchishandisa akawanda anozivikanwa ekuongorora maturusi nekureruka kukuru uye kugona kubereka bvunzo pese paunoda pasina kuita mutemo wega wega zvakasiyana.
Zvese zvakakwaniswa kubva kune yakapusa uye inonzwisisika GUI, mauri iwe unogona zvakare graphical kuona rese data uye mhedzisiro yekuongorora.
Iwe unogona kusanganisa uye kuunganidza data uye kuburitsa mhando giraidhi.
Inotora metadata kubva kune emuno uye ari kure mauto ekuchengetedza pamwe neakaongororwa data.
Unganidza dhata repiri pakushandiswa kweCPU, WiFi, Disks, nhamba dzesocket, nezvimwe. Zvese zvinokatyamadza kwekuzoongorora kwekupedzisira.
Kuedza batch kuuraya kunogona kudomwa kuti umboise bvunzo (netpref, iperf, Bufferbloat, timestamp, ping nguva,…).
Nezvese izvi iwe unogona zvakare kuenzanisa pakati pemazhinji network kana kuona kuti iyo nyaya dzekuita kuti iwe unotambura, uye uibatanidze pamwe nezvimwe zvishandiso zvakaita seEtapcap, Wireshark, Packet Sender, nezvimwe, kuongorora ako network ...
Mamwe mashoko - Flent yepamutemo webhusaiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Flent: yakakwana test kit yekuyedza network kubatana